Zụta Bitcoin (BTC) m'eji Paypal | Paxful
Zụta Bitcoin (BTC) jiri PayPal
Etu esi Azụta Bitcoin na PayPal
PayPal bụ otu n'ime usoro mbufe ego n'ịntanetị na ụwa nke na eje ozi ọzọ dị ka cheki na iwu ego. Ọ na enye ụzọ dị mfe ma dịkwa ọsọ iji zipu ma nata ego n'ụwa niile, yana usoro ọkwụkwụụgwọ oge ọ bụla, ebe ọ bụla.
Ịzụta Bitcoin na PayPal ozugbo nwere ike ikwe omume ugbu a na ebeahịa esi n'otu ọgbọ efere n'otu ọgbọ nke Paxful. Ị nwere ike ịchọta ọtụtụ ebumnobi orire na ọzụzụ ahịa na anabata PayPal dị ka usoro ọkwụkwụụgwọ kachasị amasị anyị na platfọmu anyị. Ọ bụrụ na ịchọtaghị ebumnobi orire na ọzụzụ ahịa kwesịrị ekwesị, ị nwere ike ịmepụta ebumnobi orire na ọzụzụ ahịa gị mgbe niile iji dọta ndị ọrụ chọrọ ịzụ BTC site na iji PayPal.
Maka ahụmịhe ahịa nwere nchebe karịa, ụfọdụ ndị n'ere ahịa nwere ike ịchọ usoro ndị ọzọ iji gosipụta njirimara nke ndị ahịa ha. Nzọụkwụ ndị a nwere ike ịrịọ gị ka iwepụta ụfọdụ akwụkwọ dịka kaadị ID, foto nke onwe, na / ma ọ bụ ihuenyo. Nke a na ebelata ihe ize ndụ nke wayo na ojiji na enweghị ikike nke akaụntụ PayPal, si otú a na eme ka Paxful bụrụ ọdọ ahịa dị nchebe.
Ịwu banyere ebumnobi orire na ọzụzụ ahịa na ntuziaka nwere ike ịdịtụ iche site na otu ebumnobi orire na ọzụzụ ahịa gaa na nke ọzọ, yabụ gbaa mbọ hụ na ị gụrụ ma kwenye na ihe ndị na ere ere chọrọ tupu ịmalite azụmaahịa ahụ. Ị nwere ike iji Ngwa Mgbakọ Bitcoin ntanetị anyị iji nweta atụmatụ nke ole BTC ị nwere ike ịzụta na ego ị nwere na ego ịchọrọ. Maka ozi ndị ọzọ, ị nwekwara ike ịlele nkọwa zuru ezu vidiyo enyemaka anyi na otu esi azụta Bitcoin na Paypal na Paxful.
N'ebe a na Paxful, anyị na ezube ime ka ụzọ dị mfe ị ga esi gbanwee ego PayPal gị na Bitcoin site na ebeahịa esi n'otu ọgbọ efere n'otu ọgbọ anyị dị mma. Chọta ihe kachasị mma maka gị taa.